ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရသောဆိုးဝါးသောအခြေအနေများတွင် ဘုရားမရှိဘူးလား..မသိဘူးလားဟု ခံစားမိကြပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုသောမေးခွန်းများရှိတတ်ပြီး ဘုရားကမတရားတာကိုဘာလို့ခွင့်ပြုရသလဲဟု မေးမိတတ်သည်။
၁. ဆိုးရွားသောကိစ္စများသည် ဘုရားဆီကမလာပါ။ ဘုရားသည်ကောင်းမြတ်သောဘုရားဖြစ်ပြီး မကောင်းတာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရပါ။
၂. လောကတွင်အပြစ်တရားစိုးမိုးနေပြီး ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့် လူကောင်းများလည်း ရောဂါဆိုးများရကြသည်။ မာရ်နတ်လက်အောက်တွင်ကျရောက်နေသောကမ္ဘာကြီးတွင်လူတွေသည်ပိုမိုဆိုးညစ်လာကြောင်းတွေ့ရသည်။
၃. လောကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးသည် ဘုရား၏ကယ်မခြင်းကျေးဇူးကို မျှော်လင့်နေကြပြီး ထိုအမှုကိုပြုမည့်သူများသည် ဘုရားသားသမီးများဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် "ထလော့၊လင်းလော့။ သင်၏အလင်းရောက်လာပြီ။ ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည် သင့်အပေါ်မှာ ပေါ်ထွန်းလျက်ထင်ရှားပြီ။" (ဟေရှာယ ၆၀:၁)
By Rev. Mang Uap (June1st, 2016)
ဟေဗြဲ၁၁:၃၈" ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း၊ ရွေ့လျော့လျှင်၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဉ်သည် ထိုသူကို အားရနှစ်သက်ခြင်း မရှိဟု ဘုရားသခင်အမိန့်တော် ရှိ၏။"စောင့်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခု..ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ဗိုက်ထဲက ထွက်လာမယ့် ကလေးဟာစောထွက်လာလို့မရသလို..(၉)လဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုစောင့်ရတယ်..ယောသပ်ဟာ အိပ်မက်ရပေမယ့် ပြည့်စုံမယ့်အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်ရတယ်။ အာဗြဟံဟာ ကတိရပေမယ့် ပြည့်စုံလာဖို့ စောင့်ခဲ့ရတယ်။ ထိုကာလမှာမျှော်လင့် လျက်သည်းခံရတယ်..စိတ်ရှည်ရတယ်။
ယာကုပ်၁:၁၆ "ငါချစ်သော ညီအစ်ကိုတို့၊ အလွဲမယူကြနှင့်။ ကောင်းမြတ်စုံလင်သော ဆုကျေးဇူးရှိသမျှ တို့သည် အလင်းတို့၏ အဘထံတော်က သက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ ၊ အထက်အရပ်မှ လာကြ၏။ "
ဘုရားသခင်ဆီက ကောင်းတဲ့စိတ်ကူး အတွေးလေးတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွေးကို အမိအရဖမ်းဆုပ်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုစတင်လုပ်ဆောင်ရင် အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာ- လျှပ်စစ်မီးတီထွင်ခဲ့တဲ့ အက်ဒီဆင်လိုမျိုး လောကကမ္ဘာကြီးအတွက်အကျိုးပြုမယ့်အလုပ်တွေ လုပ်မိသူအဖြစ်သမိုင်းမှာကျန်ရစ်မယ်။ ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုအတွက်လေအေးစက်ထွင်ပေးတဲ့လူတွေလိုပေါ့... လူတွေကအမှုတော်ဆောင်လို့ပြောရင် ဆုပဲထိုင်တောင်း၊ ကျမ်းစာကိုင်ပြီး တရားဟော ရမယ့်သူလို့ပဲတွေးမိတယ်။
ယောဟန် ၁၇: ၄ - အကျွန်ုပ်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်တော်၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေပါပြီ။ အကျွန်ုပ် ဆောင်ရွက်စရာဘို့ အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသော အမှုကို အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ ပြီးပါပြီ။
အရင်တုန်းက ဘဝမှာ မြန်မာပြည်သားဖြစ်ရတာ။ မြန်မာပြည်မှာနေရတာ ကို ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ လူတိုင်းအားကျတဲ့ နိုင်ငံကြီးမှာ ဘာလို့ မမွေးတာလဲ။အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဘာလို့မနေရတာလဲ အားငယ်မိပါသည်။ နိုင်ငံကြီးမှာနေသူတွေကိုအားကျမိခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့က အဆင့်မြင့်ပြီး ကိုယ်က အဆင့်နိမ့်သလိုခံစားခြင်းဖြစ်သည်။